Ku dabool gurigaaga oo idil kamaradahan si aad u hesho qiimaha mid ka mid ah Nest Cam - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Daboolka gurigaaga ku daboolo kaamirooyinkaas khadadka ah ee qiimaha hal Nest Cam - BGR
Ku dabool dhamaan aqalkaaga oo leh kamaradaha casriga ah qiimaha hal nest Cam - BGR
Maxaan ugu talineynaa kamarad guriga guriga ku jirta  Wyze Cam 1080P HD isticmaalka gudaha ? Sababtoo ah waa inaad waalan tahay inaad iibsato wax kale hadda. Sawirada Wyze waxay leeyihiin dhamaan sifooyinka muhiimka ah ee kamaradaha amniga guriga, laakiin waxay ku kacayaan qiimaha kaliya ee jajabka. Iyo "jajab" waxaan loola jeednaa jajab aad u yar - waxaad si toos ah u iibsan kartaa toddobo Wyze Cams halkii aad ka heli lahayd Nest Cam oo weli lacag leh!
Waa kuwan waxyaabaha ugu muhiimsan ee bogga wax soo saarka:
1080p full HD wuxuu si toos ah uugu sii deyn karaa telefoonka casriga ah habeenkii iyo habeenkii oo leh aragti habeen ah (illaa fogaan ah mitirada 10). La shaqeeya shabakadaha Wi-Fi 2,4 GHz (ma taageeri Wi-Fi 5 GHz)
Tiknoolajiyada codsiyada qorista ayaa ogaanaya oo u sharaxaya dhaqdhaqaaqyada wacyi-gelinta iyo qaababka fiidiyowga ee muuqaalka. Nidaamka hawlgalka wuxuu taageertaa IOM 8.0 iyo Android 5.0 ama ka dib.
Muuqashada iyo dhawaaqa codka leh kaydinta daruuriga ah oo joogto ah on 14 maalmood. Isticmaal barnaamijka Wyze (IOS iyo Android) si aad u maamusho oo aad ula wadaagto kamarado badan. Ku dar kaarka microSD (illaa ugu badnaan 32 GB) ee kaydinta deegaanka.
Saldhig muunad ah, xarigga 6 iyo saxan biraha ah ayaa kuu oggolaanaya inaad ku rakibtid Wyze Cam meel kasta - aan lahayn wax nadiif ah. Nooca dareeraha sawirka: CMOS sensor
Shaqeeyaa Alexa: Alexa weydiiso si ay u muujiyaan albaabka hore, qolka ilmahaaga ama meel kasta oo kale oo aad leedahay Wyze Cam, aqoonsi caqli leh oo uu - Wyze Cam aqoonsan dhawaaqa gaarka ah ee qalabka digniinta qiiqa iyo Kormeerayaasha CO. kuugu digayaa xaaladaha degdega ah ee gaarka ah
Raac @BGRDeals on Twitter si aad uhesho wakhti-gaaban oo aad soo bandhigto wixii ugu dambeeyay ee aad xiisaha u leedahay ee aan ka helno webka.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan dalabyada la soo kafaala qaaday iyo fursadaha daabacan ee maalgalinta, u dir email oo ay maalgelisay bb.com
Waxyaabaha ku jira BGR Deals waxay ka madax bannaan yihiin daabacaadda iyo xayeysiinta, BGR waxay heli karaan komishiin lagu iibsado fariimahayaga.
30 $ Wireless Dual Charger Tani waxay la shaqeysaa iPhone iyo Apple Watch - BGR
Waxaan dhab ahaantii dooneynaa AirPod in ay adeegsato Apple's 159 $ si ay u hesho hawl fudud oo ka mid ah kuwan dhabta ah ee telefoonnada gacanta ee xNUMX $ - BGR